शिर्ष नेताको तीनदिने समयसीमामा मधेशी मोर्चाका ९ सर्त – YesKathmandu.com
शिर्ष नेताको तीनदिने समयसीमामा मधेशी मोर्चाका ९ सर्त
शनिबार १२, भदौ २०७२
काठमाडौं, १२ भदौ । तीन दिनभित्र वार्तामा आउन शिर्ष नेताले गरेको आग्रहमा मधेशी मोर्चाले ९ सर्त तेस्र्राएको छ । बिहीबार प्रमुख दलका शिर्ष नेताले आन्दोलनमा रहेका दलहरुलाई तीन दिनभित्र वार्तामा आउन आग्रह गरेका थिए ।
शिर्ष नेताको लिखित आग्रहपछि शुक्रबार जनकपुरमा बसेको मोर्चा सम्बद्ध दलहरुको बैठकले वार्ता भन्दा पहिले सरकारले ९ सर्त मान्नु पर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । उनीहरुले पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि पछिल्लो समय दंगाग्रस्त क्षेत्रमा परिचालित सेनासम्म फिर्ता गर्नु पर्ने सर्त राखेका छन् ।
मधेशी मोर्चाले संघीय संरचना, सीमांकन, नागरिकता, प्रादेशिक अधिकार, समानुपातिक समाबेशी अधिकार, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रका बिषयमा संविधान पुर्नलेखनका सर्त पनि उनीहरुले राखेका छन् । शुक्रबार साँझ बसेको मोर्चाको अनौपचारिक बैठकले यस्तो निर्णय गरेपनि औपचारिक निर्णय भने शनिवार हुने भएको छ । शनिवारको बैठकबाट उनीहरुले सरकारलाई औपचारिक पत्र पठाउने भएका छन् ।
राष्टपति नैतिक र राजनीतिकरुपमा पराजित
अमरेशकुमारलाई ६ महिना निलम्बन गर्ने कांग्रेसको तयारी
ठुलो संख्यामा भारतीय सुरक्षाबल सीमा क्षेत्रमा परिचालन
५ सौता–सौताको भेट अस्पतालमा भएपछि….
गुडिरहेको बस पहिरोमा पुरियो, यात्रृ अझै बसभित्र
प्रचण्ड भोलि बैकक जाँदै
राष्ट्रपति यादवले गरे विभिन्न शक्तिपीठमा पुजाअर्चना
मुखर्जी र रामवरण यादवबीच ढोगभेट,को कति झुके ?
तरुण दलको जिल्ला सचिवमा मेरो उम्मेद्धारी किन ?
बलात्कार वा अपहरणपछि हत्या गरे अब आजीवन कारावास
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्वारा कनकपुर रेल दुर्घनामा मृतकका परिवारलाई राहत दिन घोषणा
‘म दसैं विदामा बसेको थिए, अब बाँकी रहेको काम ३० गतेपछि गर्छु’